Xasuuqii KM5: Buun dagaal oo u yeerey Soomaali – Goobjoog News
Xasuuqii KM5: Buun dagaal oo u yeerey Soomaali
in Qormooyin, Uncategorized
Soomaalida waxa ay si geesinimo leh u wajeheen dhibaatooyinkii ka dhashay Xasuuqii isgoyska Zoobe ee KM5 ee ay ku nafwaayeen in kabadan 300 oo qof oo isugu jiray caruur, haween, odoyaal, iyo dhalinyaraba. Waxa uu ahaa mid gilgilay quloobteenna, waxa aynu weynay xidigo dhalinyaro ah oo soo hanaqaadayay, weli waxaa Cusbitaalada jiifa dad badan oo nagu qaali ah. Haddaba maxay tahay fariinta uu xambaarsanyahay xasuuqii ka dhacay isgoyska Zoobe?.
Waxa aan doonayaa in aan maqaalkaan uga warbixiyo fariinta aan isleeyahay waa uu xambaarsanaa gumaadkii nagu dhacay, balse inta aan u galin, waxa aan jeclahay inaan tacsi u diro ehelada iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii aan waxba galabsan ee nabaddiidku naga gumaadeen, Aniga oo Eebbe uga baryaya in uu Janadiisa ka waraabiyo, si taa lamid ah waxa aan caafimaad deg-deg ah Allaah uga baryayaa dadkii dhaawucu soo gaaray.
Intaa kadib, waxa aan qabaa in fariintii uu xambaarsanaa xasuuqaas ay tahay dagaal loo iclaamiyay Soomaali islamarkaana waxa uu ahaa buun dagaal oo yeerey ama u dhawaaqay Soomaali, shaki kuma jiro cidda dagaalka lala galayo in ay yihiin kooxda sida arxandarrada ah u leysay dadkii ku dhintay xasuuqii isgoyska Zoobe ka dhacay, kooxdaas waxa ay dabarjaridda shacabka soo wadeen tan iyo 2007, waa nabaddiidka Alshabaab.
Murugada laga dareemayo guryo badan oo Muqdisho ku yaalla waxa ay cadeeyneysa in shacabka ay yihiin kuwa rasmiga ah ee ay arggagixisada beegsanayaan. Midnimadii ay shacabku muujiyeen kadib gumaadkii dhacay waxa ay ahayd mid aan horay uga dhicin Soomaaliya intii ay nabaddiidku wadeen xasuuqa shacbiga oo runtii cabsi badan ku beertay nabaddiidka, waa arin ay tahay in dawladdu ay ka faa’ideysto.
Haddaba, fariintan dagaalka iclaaminaysa waa in ay ka jawaab celiyaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo wada jira si aysan mar kale u dhicin xasuuq ama fal kale oo ay nabaddiidku ka fuliyaan Soomaaliya
Maxaa la gudboon Hay’adaha Amniga?
Waxaa marag ma doonta ah in Hay’adaha Qaranka ugu xilsaaran amniga ay ku mashquulsanyihiin kadaba degista qasaarihii dhacay, waxa ay har iyo habeen u taaganyihiin ilaalinta nafta iyo maalka shacbiga.
Hay’adaha amniga waxaa hortaalla fursad wayn oo hadii ay ka faa’ideystaan wax ka badeli karta xaaladda amni ee Muqdisho iyo guud ahaan dalka si xasillooni buuxda looga dhaliyo dalka. Fursaddu waa in shacabku uu gartay cadoowgooda islamarkaana ay kaceen oo ay u baahanyihiin abaabul ka yimaada dhanka dawladda si looga gun gaaro kacaankooda.
Qorshooyin hor leh oo mataaneya shacabka iyo ciidanka amaanka waa arinta ugu muhiimsan ee looga fadhiyo dawladda, balse hadii aysan sida ugu dhakhsiyaha badan loo hindisin qorshooyinkaas islamarkaana loo hirgelin waxaa dhici doonta in ay lunto fursadda ilaa iyo haatan taagan.
Sidaa awgeed, waxa aan hay’adaha ku shaqada leh amaanka u soo jeedinayaa in la sameyo maalmo ay si wadajir ah u hawlgalaan shacabka iyo ciidamada, si wadajir in loo hawlago waxa aan ula jeedaa in Degmooyinka laga bilaabo olole lagu mideeynayo ciidanka iyo shacabka.
Shacabka iyo dagaalka ay geli doonaan
Ku dhawaad tobon sanno oo ay kooxaha nabaddiidku daadinayeen dhiigga dadweynaha, waxaa shacabku garowsaday in ay ka dhiidhiyaan gumaadka lagu hayo ee galaafatay nolosha tiro badan oo Soomaali ah. Hadaba, waxaa la gudboon shacabka in aysan ka labalabeeyn dagaalka ku waajibay in ay la galaan arggagixisada kasoo ka kooban qaybo badan.
Waxaa laga yabaa in ay jiraan qaabab badan oo ay tahay in shacabku kula dagaalamaan arggagixisada, balse qodobada maskaxdeyda ku jira waa inta soo socota:-
Isgarab taagidda dhamaan Ciidamada Qalabka Sida, iyada oo lala wadaagayo xogaha muhiimka ah;
Ka qaybqaadashada dagaalka fikriga ah iyada oo la adeegsanayo waraabihinta, qaybtan waxaa aad u muhiim ah in Culumadu ay horkacdo;
Dhalinyaradu in ay wax ka qoraan dhibaatooyinka arggagixisada islamarkaana lagu koriyo jiilka soo socda si aysan maskaxdooda marnaba uga dhaadhicin fikirka xag-jirnimada;
Bahda Warbaabinta in ay soo saaraan barnaamijyo lagu taageerayo ciidamada, maadaama bahdan ay dhibanayaal u yihiin arggagixisada.
Shaki kuma jiro in dhamaan qodobadan aan kor kusoo sheegay aan waxba laga qaban Karin hadii aysan dawladda abuurin jawi fur-furnaan ah oo shacabka looga qaybgelinayo qorshayaasha xasilinta iyo nabadeeynta dalka.
Dhaawac saameeyn wayn nagu leh aayaa inagaaray 14, Oct oo aanan marnaba quloobteena ka bixi karin, waxaa jiray dhalinyaro ka qaybqaatay xalinta musiibadii inagu dhacday oo runtii muujiyay wadaniyad, Soomaalinimo, iyo karti; waxa ay mudanyihiin ammaan iyo mahadcelin.
Waxa aan halkan mahadcelin uga dirayaa kooxda Bukaan-la-roorka ee Aamin oo shaqo adag u haya dadka Soomaaliyeed islamarkaana muujiyay geesinimo iyo hawlkarnimo intii ay socdeen gargaargii loo fidinayay dadkeenii dhibtu ka soo gaartay musiibada.
Dhanka kale, waxaa jiray dhalinyaro iskood isku abaabulay oo la baxay magaca Gurmad252 oo iyagana qabtay hawl baaxad leh oo aan horay Soomaaliya uga dhicin, waxa ay gargaar dhinacyo badan leh u fidinayeen dadkii ku jiray Isbitaalada, haba ugu muhiimsanaato in ay isku raadinayeen dadkii kala lumay iyaga oo xogta si daahfuran ula wadaagayay dadweynaha. Waxa ay dadka Soomaaliyeed dareensiiyeen awood ka qarsoonayd oo ay dhalinyarada leedahay.
Ugu dambayn, waxa aan soo jeedinayaa in labada koox ee aan kor ku soo sheegay ay dawladda abaalmarin guddoonsiiso si loo dhiirageliyo mutaddawacnimada oo ah qaabka ugu wanaagsan ee aan si xawli ah dalkeenna dib ugu dhisi karno.
Cabdicasiis Cabdi Xaaji Gobdoon
Madaxweyne Farmaajo Oo u Ambabaxay Uganda
Akhriso Sida Aqalka Sare Uga Doodeen Khilaafka Dowladda Dhexe Iyo Dowlad Goboleedyada
Niger: 13 Askari Oo Ku Dhimatay Weerar Lagu Qaaday Xero Ciidan
Kaydka Goobjoog Select Month September 2021 (109) August 2021 (169) July 2021 (150) June 2021 (128) May 2021 (125) April 2021 (158) March 2021 (182) February 2021 (165) January 2021 (255) December 2020 (267) November 2020 (166) October 2020 (168) September 2020 (153) August 2020 (263) July 2020 (352) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (365) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)